တယ်လီနောစတား - အမေးများသောမေးခွန်းများ | Telenor Myanmar
တယ်လီနောစတား - အမေးများသောမေးခွန်းများ
တယ်လီနောမြန်မာမှ တယ်လီနောကိုအစဉ်အမြဲ အားပေးလျက်ရှိသော တယ်လီနောအထူးသုံးစွဲသူများအတွက် အထူးအစီအစဉ်် တယ်လီနောစတားအစီအစဉ်ကို စတင်လိုက်ပါပြီ။ တယ်လီနောစတားအဆင့်အတွက် သတ်မှတ်ထားသောသုံးစွဲမှု သက်တမ်း ကာလနှင့် သုံးစွဲမှုပမာဏပေါ်မူတည်၍ တယ်လီနောစတားအဆင့်ကို သတ်မှတ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ တယ်လီနောစတားအဖွဲ့ဝင်များအတွက် အထူးအစီစဉ်ပေါင်းများစွာကိုလဲ မိတ်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
တယ်လီနောစတားအဆင့်အတွက် သတ်မှတ်ထားသောသုံးစွဲမှုသက်တမ်းကာလနှင့် သုံးစွဲမှုပမာဏပေါ်မူတည်၍ တယ်လီနောစတားအဆင့်ကို သတ်မှတ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
သင်၏စတားအဆင့် အမျိူးအစားကို လစဉ် ၂ရက်နေ့တိုင်း update လုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ စတားအဆင့်အဖွဲ့ဝင်၏သက်တမ်းကာလမှာ ၃လဖြစ်ပါတယ်။
စတားအဖွဲ့ဝင်တယောက် တခါဖြစ်တယ်ဆိုရုံဖြင့် ၃လဆက်တိုက်ဖြစ်ခွင့်ရှိပြီး၊ သင်၏စတားအဆင့် အမျိူးအစားကိုလည်း လစဉ် စစ်ဆေးပြီး ပြင်ဆင်သတ်မှတ််ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
စတား အဆင့်လျော့ကျခြင်းအခြေအနေဖြစ်ပေါ်ပါက စတားအဆင့်ပြောင်းလဲခြင်းကို နောက်ဆုံးစတားဖြစ်သည့်လမှ ၃လမြောက်တွင် ပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
စတား အဆင့်မြင့်တင်ခြင်းအခြေအနေဖြစ်ပေါ်ပါက စတားအဆင့်ပြောင်းလဲခြင်းကို လစဉ် ပြင်ဆင်သတ်မှတ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
စတားအဖွဲ့ဝင်မဖြစ်သေးသူများအနေဖြင့် စတားအဆင့်အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်၊ မဖြစ်ကို လစဉ် စစ်ဆေးနိုင်ပါတယ်။
Telenor Prepaid သုံးစွဲသူများအနေဖြင့် တယ်လီနောဖုန်းကတ်သုံးစွဲမူသက်တမ်း နှင့် လွန်ခဲ့သော၃လအတွင်း ပျမ်းမျှသုံးစွဲ ထားသော ပမာဏပေါ်မူတည်ပြီး စတားတယောက်ဖြစ်နိူင်ပါတယ်။ သင်မည်သည့်စတားအမျိူးအစား ဖြစ်နိုင်သလဲဆိုတာကို အောက်ပါဇယားကို အသုံးပြု၍ ခန့်မှန်းနိုင်ပါသည်။
လွန်ခဲ့သော၃လအတွင်း ပျမ်းမျှသုံးစွဲ ထားသော ပမာဏ (ကျပ်)
၆လ နှင့် ၁နှစ်ကြား ၁၂၅၀၀ ကျပ် ၁၇၅၀၀ ကျပ် ၂၅၀၀၀ ကျပ်
၁နှစ် နှင့် ၃နှစ်ကြား
၃ နှစ် နှင့်အထက်
လွန်ခဲ့သော ၃လ မှ ပျှမ်းမျှသုံးစွဲမူ ဆိုသည်မှာဘာလဲ။
Prepaid သုံးသူများအတွက်ဆိုရင် ပြက္ခဒိန်လ အတိုင်း သုံးစွဲမူ ပမာဏပေါ်မူတည်၍ သတ်မှတ်ပေးပါသည်။ ဥပမာ - လွန်ခဲ့သော ၃လမှ ပျှမ်းမျှသုံးစွဲမှုသည် နောက်ဆုံးလ၏ နောက်ဆုံးရက် အထိ အကြံူးဝင်ပါသည်။ ဇန်နဝါရီ၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၊မတ် ၃လ ဆိုပါစို့ ပျှမ်းမျှသုံးစွဲမှုသည် မတ်လ ၃၁ နေ့အထိပါဝင်ပါသည်။
အားလုံးသောဝန်ဆောင်မူများမှ ဝင်ငွေများ (ဖုန်းခေါ်ဆိုမှု နှင့် ဒေတာ) ၊ VAS ၊ IDD ၊ Roaming များမှ သုံးစွဲမူပမာဏပေါ်မူတည်၍ တယ်လီနောစတားအဖြစ် သတ်မှတ်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။
လစဉ် ဒေတာ သုံးစွဲမူသက်တမ်းကိုတွက်ချက်ရာတွင် အဆိုပါ ဆင်းကတ်စတင်သုံးစွဲချိန်ကို မူတည်၍တွက်ချက်ပါသည်။ ဥပမာ အဆိုပါဆင်းကတ်၏သက်တမ်းသည် စတင်သုံးစွဲချိန်မှစ၍ ၄လနှင့် ၂၇ရက် ရှိနေပြီ ဖြစ်ပါက ၎င်း၏သုံးစွဲမှုသက်တမ်းမှာ ၄လဖြစ်ပါသည်ဟု ယူဆပါမည်။
USSD : *2345# သို့ဖုန်းခေါ်ဆိုပါ။
SMS : 2345 သို့ STAR ဟု SMS ပို့ပါ။ (အခမဲ့)
App : MyTelenor app ၏ ပင်မစာမျက်နှာ (ဧပြီလကုန်တွင် အသုံးပြုနိုင်မည်။)
တယ်လီနောအရောင်းဆိုင်များတွင် စောင့်ဆိုင်းစရာမလိုဘဲ ဝန်ဆောင်မှုများကို ဦးစားပေးဆောင်ရွက်ပေးပါမယ်။
care@Telenor.com.mm သို့ e-mail ပို့၍ တိုင်ကြားခြင်း။
စတားအဖွဲ့ဝင်များ၏ တိုင်ကြားချက်များကို ဦးစားပေး ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ပေးပါမယ်။
စတားအဖွဲ့ဝင်များအတွက် သီးသန့်တာဝန်ချထားသော ဝန်ဆောင်မှုပေးသူများမှ တာဝန်ယူဖြေကြားပေးပါမယ်။
တယ်လီနောစတားများသည် ECB ကြိုသုံးငွေကို ငွေအဆင့်များအတွက် ၂ဆ - ၁၆ဝဝကျပ်(၈၀၀*၂) ၊ ရွှေအဆင့်နှင့် ပလက်တီနမ်အဆင့်များအတွက် ၃ဆ - ၂၄ဝဝကျပ် (၈၀၀*၃) အထိရယူနိုင်ခြင်း။
Telenor STAR ရဲ့ပရိုမိုးရှင်း သတင်းအချက်အလတ်ကို ဘယ်လိုသိနိုင်သလဲ။
ပရိုမိုးရှင်း သတင်းအချက်အလက်ကို SMS မှတဆင့် တယ်လီနောစတားများထံ အသိပေးကြေငြာပေးပါမယ် ထိုနည်းတူ တယ်လီနော ပါတနာများမှလည်း တယ်လီနောစတားများသိစေရန် အချက်အလက်များ အသိပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ အချိန်နှင့်တပြေးညီ ပရိုမိုးရှင်း သတင်းအချက်အလက်များကို အသေးစိတ် သိရှိရန် ဤနေရာ တွင်ဝင်ရောက်လေ့လာနိုင်ပါသည်။
ပရိုမိုးရှင်း ကုတ်နံပါတ်ကို ဘယ်လိုရယူနိုင်ပါသလဲ။
စတားတို့ရရှိသော ပရိုမိုးရှင်း ကမ်းလှမ်းချက်များကို ဘယ်လိုနည်းလမ်းနဲ့ ရယူရမလဲဆိုတာ တယ်လီနောမြန်မာမှပေးပို့သော SMS ထဲတွင်ရှင်းလင်းပြသပေးထားပြီးဖြစ်ပါတယ် ထိုနည်းတူ ဤနေရာ တွင်လည်း အသေးစိတ်ကို ဝင်ရောက်လေ့လာနိုင်ပါတယ်။
To get the promo code, please send “PIZZAHUT” to 2121.
To get the promo code, please send “SHOPMM” to 2121.
Oway Ride in Yangon
To get the promo code, please send “OWAY” to 2121.
MiniOway for Mandalay
To get the promo code, please send “MINIOWAY” to 2121.